Amasiko aseCuba | Iindaba Zokuhamba
Maria | | Tyhubha, isiko
Njengomphumo womxube weenkcubeko, kwinkqubo eyadlula kwiinkulungwane ezininzi, inkcubeko eyahlukileyo yobutyebi obukhulu yazalwa ebonisa iSpanish, aboriginal kunye neAfrika zombini kwezobugcisa, umculo, isisu kunye nendlela yokubona ubomi. Ukuze sazi abantu baseCuba ngcono, kwisithuba esilandelayo sijonga ezinye zeenkcubeko ezibalaseleyo zaseCuba.
1 Iminyhadala yemveli yaseCuba
2 Imibuliso eCuba
4 Imitshato eCuba
5 Isinxibo sendabuko saseCuba
6 Gastronomy yaseCuba
7 Ukugcina ixesha ngaphezu kwako konke
8 Umkhuhlane negama lawo
9 Nika isipho simahla
10 Ice cream nanini na
Iminyhadala yemveli yaseCuba
Ngexesha leKrisimesi kulisiko ukuba usapho luhlangane ukuze lonwabele isidlo esimnandi, esihlala sinayo ihagu njengesitya sayo senkwenkwezi kunye nokugqibezela iintlobo ngeentlobo zeedessert. Nangona kunjalo, eCuba akukho kubhekiswa kuSanta Claus kwaye ke ukutshintshiselana ngezipho akuqhelekanga.
Ngokubhekisele kuNyaka oMtsha, kulisiko eCuba ukuba ngokufuziselayo kususwe yonke into embi kunyaka ophelileyo ngokuyimela kunodoli otshiswe ngomlilo ngosuku olwandulela unyaka omtsha. Enye indlela yokutsala ithamsanqa kunye nokuchuma kukuphosa amanzi emagxeni akho. Kukwalisiko eCuba ukubhiyozela ukufika koNyaka oMtsha ngomboniso omkhulu womlilo.
Kwelinye icala, eminye imithendeleko eyaziwayo yaseCuba zii-carnival, iibhendi zobhedu, iiparrandas, imithendeleko yabalimi kunye nemibhiyozo yabaxhasi. Phakathi kwezona zibalaseleyo ziiCarnivals zaseHavana kunye nezo zeSantiago de Cuba, iBandos de Majagua de Ciego de ilavila, iCharangas de Bejucal kwiphondo laseMyabeque okanye iRomerías de Mayo ebhiyozelwa kwisixeko saseHolguín.
Kulisiko ukuba amadoda abulisane ngokuxhawulana nabasetyhini ngokuncamisa esidleleni. Banothando kakhulu kwaye akunakuze kubekho ukugqitha kokuzithemba njengenxalenye yesiko labo lonxibelelwano.
Abantu baseCuba banetalente ekhethekileyo yokuziqhelanisa nemidlalo ukuze igqiza laseCuba lihlale lifumana iimbasa ezininzi kwiMidlalo yeOlimpiki. Ukongeza, xa kufikwa kwindibaniselwano yolonwabo kunye nemidlalo, ibaseball yenye yezona zinto azithandayo zokuzonwabisa kangangokuba uninzi lwabadlali bebhola ebalaseleyo kwiligi yaseMelika bavela eCuba. Eminye imidlalo ethandwayo yibhayisikile, ukuqubha, amanqindi, ibhola yevoli kunye nomnyazi.
Isiko laseCuba elinomdla kakhulu emitshatweni kukuba abo bafuna ukudanisa nomtshakazi kuqala kufuneka babeke imali kwilokhwe yakhe. Isipho esincinci somfuziselo sokuba umtshakazi nomyeni babulele iindwendwe zabo.
Isinxibo sendabuko saseCuba
Ngokubhekisele kwimpahla yemveli yaseCuba, sifumana iimpahla ezinje ngeguayabera (isiqwenga sokusetyenziswa okuqhelekileyo kunye negala), umnqwazi we-yarey (oqhelekileyo wabalimi baseCuba) kunye nengubo yaseCuba, isambatho sobufazi bendabuko esusela kwinkulungwane ye-XNUMX .
Cuisine yaseCuba sisiphumo sokudityaniswa kweSpanish, aboriginal, iAfrika, iYucatecan kunye ne-Asia gastronomy. Phakathi kwezona zitya zidumileyo yosa inyama yehagu, ajiaco, congrí, buñuelos, tamales, casabe kunye neetones. Ngokuphathelele kwiziselo eziqhelekileyo, ezi zibonakaliswa yimveliso yeswekile kunye nemozulu yetropiki yesiqithi, ekhokelela kwiziselo ezinencasa nezomkhenkce ezinjengemojito, piña colada, daiquiri, cuba libre, champola, i-oriental pru, iguarapo kunye nekofu.
Ukugcina ixesha ngaphezu kwako konke
Ngaphandle kokuba kukho into engxamisekileyo engalindelekanga ngomzuzu wokugqibela, abantu baseCuba banomkhwa wokungafiki emva kwexesha kuyo nayiphi na indawo, nokuba yeyokubonana, intlanganiso okanye iqela. Banokuqhubela phambili kodwa bangaze bafike emva kwexesha. Ukubamb 'ixesha kulisiko elendeleyo.
Umkhuhlane negama lawo
E-Cuba kulisiko ukubiza umkhuhlane kunye nomkhuhlane ngegama lesepha opera villain. Abantu baseCuba abaphulukani nobuchule babo bokuyila naxa begula kwaye bahlala bekhupha icala elonwabileyo layo yonke into.
Nika isipho simahla
ICuba inesisa ngendalo yiyo loo nto ihlala inika ngaphandle kokulindela nantoni na. Bathanda ukumangalisa abahlobo kunye nosapho ngesipho esingalindelekanga esizisa uncumo ebomini.
Umfanekiso | ICuba eMiami
Ice cream nanini na
Nokuba kukwisitya esigciniweyo okanye kwiipleyiti, le dessert imnandi ihlala ikhona kubomi baseCuba. Abawunikeli umhlaba.
Umculo waseCuba awunakubakho kwaye ukusukela ekuqaleni kwenkulungwane yama-XNUMX umculo weli lizwe uye wabekwa kwilizwe jikelele. Isingqisho esichaza iCuba njenge "nyana yenyoka", ethi ibalasele njengaphambi kwe "salsa" kunye ne "cha cha cha". Kukwakho nababonisi bomculo wakhe njengoBenny Moré, uCelia Cruz okanye uLa Lupe.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba Zokuhamba » ngokubanzi » isiko » Amasiko aseCuba